Cerfs-Volants: Van Cleef & Arpels 'Jewellery ၏ထူးကဲလှပမှုနှင့်ဂုဏ်ပုဒ် HIGH ရတနာအိပ်မက်
ဘ‌‌လော့ခ် ခေတ်ပြိုင်အပိုင်းပိုင်း အမြင့်ရတနာ အထင်ကရ စိတ်ဝင်စားခြင်း Jewellery Savoir-Faire ဗန် Cleef & Arpels
မတ်လ 6, 2015
Van Cleef & Arpels ရတနာစုဆောင်းမှုအသစ်သည်မှော်အတတ်များဖြင့်လည်ပတ်နေသည်။ Van Cleef & Arpels သည်အလင်းနှင့်လှုပ်ရှားမှုကိုသစ္စာရှိသောစကားပြန်၊ ကောင်းကင်မှအလင်းလှုပ်ရှားမှု၏အထင်ကရအဖြစ်စွန်ကိုဂုဏ်ပြုသည်။ အာရှယဉ်ကျေးမှုကိုအုပ်ထိန်းသူအဖြစ်ယူမှတ်သောစွန်သည်၎င်း၏ရွှင်လန်းသောအရှိန်အဟုန်ကိုရတနာအသစ်များနှင့်ရတနာစုဆောင်းမှုအသစ်သို့ပေးအပ်သည် - Cerfs-Volants ™။ နူးညံ့သိမ်မွေ့ပြီးသေသေချာချာသန့်ရှင်းသပ်ရပ်စွာထားရှိသောစွန်သည် Van Cleef & Arpels အတွက်အဓိကလှုံ့ဆော်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ အမွေး၊ ငှက်၊ လိပ်ပြာစသည့်ခေါင်းစဉ်များကိုစကတည်းကစတင်လေ့လာခဲ့သည်။ ဤသည်ကိုဂရပ်ဖစ်ပုံဖော်ထားသောလက်ပတ်နာရီ Cadrans Extraordinaires ™ Cerfs-Volants ကိုနှစ်သက်ခဲ့ပြီးယနေ့ခေတ်ရတနာဖန်တီးမှုရှစ်ခုနှင့်ထူးခြားသောအမြင့်ဆုံးလက်ဝတ်ရတနာ ၇ ခုဖြင့်တိုးမြှင့်ထားသည်။ ဤရွေ့ကားအဆုံးသည် Maison ၏ပုံမှန်ပုံစံကိုသီလသရုပ်ဖော်။ လှုပ်ရှားမှုနှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်အယူအဆများ၏မြင်သာသောပြောင်းလဲမှုအပေါ်အာရုံစူးစိုက်သည်။ စားဖိုမှူး-d'oeuvre.
၎င်း၏ကန့်သတ်ချက်မရှိသော savoir-faire ၏ကျေးဇူးကြောင့် Van Cleef & Arpels သည်ရတနာဖန်တီးမှုရှစ်ခုအားထူးခြားသောလက္ခဏာတစ်ခု - လည်ဆွဲ၊ လက်ကောက်၊ လက်ကောက်၊ လက်စွပ်နှစ်ကွင်းနှင့်နားကပ်သုံးခုကိုပေးနိုင်သည်။ ဘဝနှင့်ရဲရင့်ခြင်းနှင့်ပြည့်ဝ၏တစ် ဦး ကဗြာဆနျဗေဒ, သူတော်ကောင်းတရား၏လက်မှုပညာ၏ယုဂျ။ Van Cleef & Arpels ၏အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်ရှိစွန်သည်အလင်း၏ထူးခြားချက်ကိုကိုယ်စားပြုပြီးမွေးဖွားသည် Entre les Doigts ™လက်စွပ်လှပသောအသံထွက်များကိုဖော်ပြနေစဉ်စွန်၏ဖဲကြိုးများသည်လက်တစ်ဖက်၌ပြန့်ကျဲသွားသည်။ လက်ကိုင်အိတ်များသည်လက်ချောင်းများ၏ဟန်အမူအရာများကို လိုက်၍ အလွန်သွက်လက်နေသောရတနာဖြစ်သည်။
လက်ချောင်းကွင်းကြားရှိ Cerfs-Volants 1-motif ။ ရွှေပန်းရောင်၊ ပန်းရောင်နှင့်နီနီသောနီလာများ၊ ပုလဲနှင့်စိန်အမေတို့ဖြစ်သည်။
Cerfs-Volants 1 motif Finger RIng အကြား။
ပျံသန်းသည့်စွန်၏လှုပ်ရှားမှုကိုအကောင်းဆုံးနည်းဖြင့်ပြန်ပေးနိုင်ရန်အတွက် Entre les Doigts လက်စွပ်ကိုအလွန်မြင့်မားသောကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများတွင်အလုပ်လုပ်ခဲ့သည်။ ကွဲပြားခြားနားသောအဆင့်များ၌ထားရှိသော၎င်း၏ဒြပ်ပေါင်းများစွာသည်လေနှင့်အတူပျံနေသည့်စွန်နှင့်၎င်း၏ဖဲကြိုးများကိုပုံဆောင်သည်။ ကွဲပြားခြားနားသောအရိပ်အမျိုးမျိုး၏မိခင် -of ပုလဲနှင့်အတူသဘောပေါက်အဆိုပါစေ့စပ် marquetry အလုပ်, ဒီရတနာ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အပေါ်တက်ကြွပေးသကဲ့သို့ဆန့်ကျင်ဘက်ထိုကဲ့သို့သောအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဖန်တီးပေးပါတယ်။ လက်စွပ်၏ကိုယ်ထည်သည်လေထဲတွင်ပျော့ပြောင်းနေသည့်ဖဲကြိုး၏အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကြောင့် motif ၏အစိတ်အပိုင်းနှစ်ခုသည်အလင်းကိုဖမ်းယူနိုင်ပြီးသူတို့၏တောက်ပမှုကိုအမြဲချီးမြှောက်သည်။ အချိုးမညီတဲ့တစ်စုံ ပုတီး ပထမနေရာမှာအဖြူနှင့်မီးခိုးရောင်ပုလဲအပြာ၊ ဒုတိယမှာစိန်များနှင့်အဖိုးတန်ကျောက်မျက်ရတနာများတပ်ဆင်ထားခြင်းဖြစ်သည်။
Cerfs-Volants ကြီးမားသောမော်ဒယ်ပုတီး။ ပန်းရောင်ရွှေ၊ ပန်းရောင်နှင့်နီနီသောနီလာ၊ အဖြူရောင်၊ အဖြူနှင့်မီးခိုးရောင်ပုလဲနှင့်စိန်များရှိအချိုးမညီသောပုတီးစိပ်များသည်အံ့သြစရာကောင်းပြီးစွန်၏ကွဲပြားခြားနားသောကိုယ်စားပြုမှုနှစ်ခုကိုစုစည်းပေးသည်။
chatelaine တွင် ဘရောင်း, အစွန် motif မိုthus်းတိမ်ကိုစီးနှင့်အတူ, အရှင်နူးညံ့သိမ်မွေ့သောမိုဘိုင်းကျောက်မျက်ကိုယ်စားပြုမိုးရွာရွာအကြားပျံသန်း၏အထင်အမြင်ပေးခြင်း။ စိန်နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောကွင်းဆက်အနည်းငယ်သည်ဤရည်ရွယ်ချက်နှစ်ခုကိုချိတ်ဆက်နိုင်သည်၊ ၎င်းသည်လူတစ် ဦး ၏ဆန္ဒအရနေရာတွင်တည်ရှိနိုင်ပြီးတီထွင်ဆန်းသစ်သောယန္တရားကြောင့်သီးခြား ၀ တ်ဆင်နိုင်သည်။
Cerfs-Volants ကလစ်။ ပန်းရောင်ရွှေနှင့်နီလာ။
အဆိုပါ လက်ကောက် Cerfs-Volants စုဆောင်းမှုတွင်စိန်နှင့်ပြုလုပ်ထားသောရွေ့လျားနေသောကွင်းဆက်လေးခုဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ Maison ၏ရည်းစားဟောင်းပြသမှုကိုအပြည့်အဝပြသသည်။
Cerfs-Volants လက်ကောက်၊ ပုံစံငယ်။ Virtuoso လက် ၀ တ်ရတနာများသည်ဤလက်ကောက်တွင်ပန်းရောင်၊ နီညိုရောင်နီလာ၊ အဖြူရောင်၊ အဖြူနှင့်မီးခိုးရောင်ပုလဲနှင့်စိန်တို့ဖြင့်သက်တောင့်သက်သာရှိပြီးရဲရင့်စွာနှင့်ကဗျာဆန်ဆန်အလှဆင်ထားသည်။
အနည်းငယ်သောနူးညံ့သိမ်မွေ့သောတိမ်တိုက်နောက်ကွယ်မှလျှို့ဝှက်ထားခြင်းကြောင့်စွန်၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာလက်ကောက်ဝတ်၏အထက်ပိုင်းတွင်နေရာကိုအမြဲရှာဖွေရန်ဖြစ်သည်။ ဗန် Cleef & Arpels အဆိုပါရွေးချယ်သည် သင်ထောက်ကူပစ္စည်းများ အများဆုံး rigourous အရည်အသွေးသတ်မှတ်ချက်များအရ, ဤစုဆောင်းမှုကြော့ interplaying အရိပ်ကိုဆက်ကပ်။ ပုလဲ၏အဖြူရောင်နှင့်မီးခိုးရောင်မိခင်တို့သည်သူတို့၏ရောင်ပြန်ဟပ်မှုနှင့်ညီညွတ်သည်။ ပန်းရောင်နှင့်နီနီသောနီလာများသည်နူးညံ့သောအရိပ်များကိုကြိုးကိုင်စေသည်။ ကွဲပြားခြားနားသည် နည်းစနစ် အပိုင်းအစတိုင်းအတွက်အသုံးပြုသောတောက်ပသော၊ တောက်ပသော၊ စတုရန်းပုံသဏ္settingာန်အမျိုးမျိုးဖြင့်အသုံးပြုထားသည့် Maison သည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောဖန်တီးမှုများကိုရှင်သန်ရန်အတွက်နေရာချထားပေးသည့်ကြီးမားသောအရောင်အသွေးစုံသောသရုပ်သကန်ကိုပြသသည်။ တူညီသောအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အတူတိုင်းအပိုင်းအစ၏နောက်ကျော။ နောက်ခံအကြောင်းအရင်းသည်ဤရတနာရှစ်ခုအနက်တစ်ခုစီတွင်ပုံဖော်ထားခြင်းဖြစ်သည်၊ အလင်းသည်သူတို့မှတစ်ဆင့်ဖြတ်သန်း။ စွန်နယ်၏နူးညံ့သိမ်မွေ့မှုနှင့်နူးညံ့သိမ်မွေ့မှုကိုကြွယ်ဝစေရန်ဖြစ်သည်။
လက်ချောင်းကွင်းကြားရှိ Cerfs-Volants 1-motif ။ ပန်းရောင်ရွှေနှင့်နီလာ။
Cerfs-Volants လက်မောင်းလက်စွပ်အကြား2motif ။
Cerfs-Volants ပုတီးကွင်း။ ပန်းရောင်ရွှေ၊ ပန်းရောင်နှင့်နီညိုရောင်၊ ရွှေဖြူ၊ အဖြူနှင့်မီးခိုးရောင်မိခင်နှင့်စိန်များဖြစ်သည်။
Cerfs-Volants စုဆောင်းမှုနှင့်အတူ Van Cleef & Arpels သည်ထူးခြားသောနှင့်ပြောင်းလဲနိုင်သောရတနာများအတွက်သမိုင်းကြောင်းကိုပြသသည်။ အဆိုပါစွန် motif အတွက်ကိုလည်းဗန် Cleef & Arpels နေဖြင့်အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူသည် ခုနစျပါးမြင့်သောရတနာထူးခြားသောလက်ရာ.
ဤနေရာတွင်တင်ပြထားသောအပိုင်းသုံးပိုင်းသည်အားလုံးသောအထိမ်းအမှတ် Serti Mystérieux™နည်းစနစ်ကို ဗဟိုပြု၍ လည်ဆွဲ၊ လက်စွပ်၊ နားကပ်နှင့်နားကပ်တစ်ချောင်းပါရှိသည်။ ၁၉၃၃ ခုနှစ်တွင်မူပိုင်ခွင့်ရရှိထားပြီးဖြစ်သော Mystery Setting သည်၎င်း၏ကျောက်မီးသွေးသတ္တုအခြေအနေကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းမရှိဘဲကျောက်တုံးပေါ်တွင်အလေးထားမှုတစ်ခုလုံးကိုပြုလုပ်သည်။
Cerfs-Volants Mystérieuxလက်ဗွေကွင်းကြားတွင်။ ပတ်ပတ်လည်နှင့် drop- ဖြတ်ပတ္တမြား။ ပတ္တမြားနှင့်စိန် en Serti Mystérieuxဆက်တင်။
Cerfs-Volants Mystérieuxလည်ဆွဲ - Serti Mystérieuxဝန်းကျင်၌ baguette ဖြတ်ထားသောပတ္တမြား၊ ပတ္တမြားနှင့်စိန်များ။
Cerfs-Volants Mystérieuxနားကပ်များ - အဖြူနှင့်ပန်းရောင်ရွှေ၊ baguette ဖြတ်ပတ္တမြား၊ Mystery Set ပတ္တမြားနှင့်စိန်များ။
စွန်နှင့်ပတ္တမြားတို့သည်စွန်၏ခန္ဓာကိုယ်ကိုတည်ဆောက်စဉ်ကွဲပြားခြားနားသောဒီဇိုင်းများနှင့်အတူခင်းထားသည့်အနုပညာတစ်ခုဖန်တီးရန်ရောနှောနေသည်။ ကွဲပြားခြားနားသောဖြတ်တောက်မှုအမျိုးမျိုးဖြင့်စိန်များဖြင့်ဖော်ပြထားသည့်စွန်အမြီး - တောက်ပသော၊ ကျဆင်းမှု၊ navette နှင့် baguette ဖြတ်တောက်မှု - အပြင်းအထန်လှုပ်ရှားမှုများအတွက်အလွန်ချိတ်ဆက်ထားသောအလုပ်ကြောင့်ကျေးဇူးတင်စွာဖော်ပြခဲ့သည်။
နောက်ထပ်ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ထူးခြားသည့်အပိုင်းများကိုလာမည့်မတ်လ ၂၄ ရက်တွင်ပြသမည်ဖြစ်သည်thMaison သည်မီလန်ရှိဂုဏ်သတင်းကြီးသော Via Montenapoleone တွင်ယင်း၏အထင်ကရစတိုးဆိုင်သစ်ကိုတရားဝင်ဖွင့်လှစ်မည့်အချိန်တွင်။
ထို့နောက်မကြာမီသင့်ကိုတွေ့မြင်ပါ၊ သင်၏အိပ်မက်များသည်မြင့်မားစွာပျံသန်းစေပါ CC
ပို့သည် ဂလော်ဒီယာ Carletti, အချိန်မှတဆင့်ရတနာ. ၏ပစ္စည်းယဉ်ကျေး ဗန် Cleef & Arpels စာနယ်ဇင်းရုံး။
Tags:.ရာဝတီ • မင်းသမီး • ထူးချွန် • ယင်ကောင် • ဟဲဟဲ • ရတနာ • စွန်ငှက် • စွန် • ပေါ့ပေါ့တန်တန် • ရွေ့လျားမှု • လှုပ်ရှားမှု • ဘုန်းကြီး • VanCleefArpels
“ မှတ်ချက် ၁ ခုCerfs-Volants: Van Cleef & Arpels 'Jewellery ၏ Excellency and Splendor"
ဧပြီလ 10, 2015
ဘလော့ဂ်ရေးသားနည်း။ အဲဒါကိုကျွန်ုပ်ရဲ့ bookmark ဝက်ဘ်ဆိုက်မှာထည့်ပြီးမကြာခင် bqck ကိုစစ်ဆေးတော့မှာပါ။ ယူ